Warbixinnada Warbaahinta |
Sidee looga ogaan karaa been abuur N95, NIOSH, ama KN95 maaskaro neefsashada oo laga keenay Shiinaha.
FADLAN OGOW: Maqaalkan si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa markii aan helayo macluumaad cusub, oo sax ah oo ku saabsan dhibaatadan socota. Sidoo kale, waxaan bilaabayaa xalka halkaas oo aan ka abuureyno internetka ugu horreeya, suuq furan oo loogu talagalay alaab-qeybiyeyaasha aqoonta u leh iyo dhammaadka isticmaaleyaasha PPE dhab ah: PPEConnector.com. Tan iyo bishii Maarso, ...
Sida ugu fiican ee looga fogaado neefsashada qiiqa waa inaad gudaha ku ekaato. Haddii ay lagama maarmaan tahay in dibadda loo baxo xaaladaha qiiqa, halkan waxaa ku yaal macluumaad ku saabsan adeegsiga maaskarada N95 ee maaskaro. Q. Waa maxay qalabka neefsiga ee N95? A. Nizer neefsade waa neefsade hawo nadiifiya (APR) oo uu shahaado ka helay National Inst ...
Websaydh cusub ayaa sharraxaya sida isbitaallada ay u nadiifin karaan oo dib u isticmaali karaan waji yar oo N95 ah si loola dagaallamo COVID-19
Maaddaama shaqaalaha caafimaadka iyo jawaabeyaasha ugu horreeya ee Mareykanka ay isku dayayaan inay joojiyaan aafada iyada oo aan la helin qalab difaac oo ku filan, saraakiisha caafimaadka ayaa lagu qasbay inay tixgeliyaan joojinta - sun-siinta iyo dib-u-isticmaalida N95 waji si ay uga gaashaanta kuwa shaqooyinkooda u keenaya fayraska keena COVID-19. Maanta, koox ...
Maskaxda N95 ma la isticmaali karaa?
Cudurkii ugu dambeeyay ee Coronavirus (Covid-19) wuxuu abuuray isbedello badan oo ku saabsan sida nolol maalmeedka loo noolaado iyo shaqaalaha caafimaadkuna shaqooyinkooda u gutaan. Nasiib yaraanta N95 ayaa horay u dhacday (SARS, MERS, iwm.), Kaliya kuma ahan miisaankan. CDC-ku kuma talinayso in guud ahaan dadku xirtaan ...
Sheekada asalka ah ee aan la sheegin ee maaskaro N95
Way adagtahay in laga fekero calaamadda COVID-19 oo aad uga cabsi badan qalabka neefsashada ee N95. Maaskarada ayaa si adag ugu dhegan wajiga waxayna awood u leedahay inay ka sifeyso hawada 95% walxaha hawada ka baxa, sida fayraska, oo qalabka kale ee difaaca (sida maaskaro qalliinka) aysan sameyn karin. Waa leexsi naf badbaadin ah ...
Dib u adeegsiga N95 Masks
Maaddaama Cudurka faafa ee COVID-19 uu galayo bishii labaad (Abriil 2020) Mareykanka, mid ka mid ah qaybaha ugu fudud ee qalabka caafimaadka ayaa si aad ah ugu yar helitaanka: wejiga wajiga ka ilaaliya heerka fasalka caafimaadka, oo sida caadiga ah loo farsameeyo laguna caddeeyo hal adeeg oo keliya. Hadda, si aan ula kulmo waxyaabaha muhiimka ah oo dhaqsaha badan waxaan ...
Shiinaha ayaa 'qarameeyay' N95 Maaskaro sameysa
Shiinaha ayaa 'qarameeyay' soosaarayaasha waa weyn ee N95, taasoo adkeyneysa iibsadayaasha halkaan inay gacmahooda ku saaraan wax soo saar taas oo, markale, Shiinaha ay xukumaan, ayuu yiri soo dhoweeye weyn oo Mareykan ah. "Dhammaan amarradeenna, malaayiin wajiyad ah N95, ayaa la joojiyay usbuucii hore," ayuu yidhi Leo Friedman, oo ah madaxa shirkadda iPromo ee Chica ...
Ma jiraa farqi u dhexeeya N95 iyo KN95 waji duubista?
Maska caadiga ah ee N95 / KN95 1. Waa maxay maaskaro N95? Maxay ku kala duwan yihiin maaskaro KN95? Waa maxay waji-gashiga kale ee isla fasalka? Mask Maaskarada 'N95' waxaa loola jeedaa maaskaro ay xaqiijisay hay'adda NIOSH (Machadka Qaranka ee Badbaadada Shaqada iyo Caafimaadka) oo leh waxtarka ilaalin aan saliid lahayn ee aan ka yareyn ...